We Fight We Win. -- " More than Media ": ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပပျောက်စေမည့် မလုံတလုံဓါတ်ပုံများဖေါ်ပြသောစာစောင်အား စီစစ်ရေးမှ တားဆီးပိတ်ပင်မှုမရှိ။
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပပျောက်စေမည့် မလုံတလုံဓါတ်ပုံများဖေါ်ပြသောစာစောင်အား စီစစ်ရေးမှ တားဆီးပိတ်ပင်မှုမရှိ။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းကထုတ်ဝေခဲ့သော The Ladies' ရဲ့ဂျာနယ်အချပ်ပိုတွင် အနုပညာရှင်များကအမေစုအားမဲပေးမည် ဟု ဖေါ်ပြခဲ့သောကြောင့် အနုပညာရှင်များသည် NLD ကို ဘက်လိုက်အားပေးသည်ဟူသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ထုတ်ဝေခွင့်မပြုခဲ့ပေ။ MRTV4 က သင်္ကြန်အထူးထုတ်ဝေသောTV လမ်းညွှန်စာစောင်တွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို မှေးမှိန်ရာရောက်စေသော မလုံတလုံမော်ဒယ်အမျိုးသမီးများရေကစားဟန်ဓါတ်ပုံများ ဖေါ်ပြထားမှုကို စာပေစီစစ်ရေးကထုတ်ဝေခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ထုတ်ဝေခွင့်မရသောThe Ladies' အချပ်ပို
TV လမ်းညွှန် သင်္ကြန်အထူးထုတ်စာစောင်
We want free speech and this is free speech. If you hate it, don't post it on your blog. You areapart of the problems.
I saw the news that whore spend about $100000 for the shopping. How come the modal can spend that much while the country in rag? Media must report more of the corruption so that crook military family and politicians can not get away with punishment. Corruption control must be the priority for the country so that Burmese tax payer will enjoy the life and punish the thieve that steal Burmese natural resources.